स्थलगत : इनरुवा अस्पताल आफैं बिरामी
विराटनगर– दरवन्दीअनुसार चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी नहुँदा सुनसरी सदरमुकाम स्थित ५० बेडको इनरुवा अस्पतालको सेवा प्रभावित छ। सिमित स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले अस्पतालको सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्।
राणा प्रधानमन्त्री भीम शमसेरका पालामा १९८७ सालमा ‘झोडा फडानी अस्पताल’ का नामले सञ्चालित यो अस्पताल प्रारम्भिक चरणमा ५ वेडमा सञ्चालन थियो । त्यसपछि १५ र २०६७÷०६८ सालमा २५ वेडमा स्तरोन्नती भयो।
वढ्दो शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि र बिरामीको चापका कारण डेढ वर्षअघि मात्रै अस्पताललाई ५० वेडमा स्तरोन्नती गरिएको छ । २०७३ माघ २० गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयसँगै २०७४ साउन १ गतेदेखि ५० बेडको सेवा सुरु भएपनि थप स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी हालसम्म पनि पठाइएको छैन।
मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि २०७४ जेठ २२ गते निजामति किताव खानाले ५० बेडको अस्पतालका लागि ९ जना विशेषज्ञ डाक्टर सहित ५२ जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको दरवन्दी खडा गरी पत्राचार गरेको थियो। पत्रमा वजेट प्रयोजनार्थ थप ७ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि जेठ २४ गते नै सोही अनुसारको जानकारी अस्पताललाई गराएको छ। तर, दरवन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भने हालसम्म पनि नआएको प्रशासन प्रमुख नेत्रप्रसाद खतिवडाले वताए । उनी गत भदौ पहिलो सातादेखि प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्।
अस्पतालमा ११औं तहको प्रमुख मेसु, कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, परामर्श शल्यचिकित्सक, परामर्शदाता हाडजोर्नी शल्यचिकित्सक, परामर्शदाता मनोरोग विशेषज्ञ, कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्ट, जनरल फिजिसियन, रेडियोलोजिस्ट लगायत ९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरवन्दी छ। तर, प्रमुख मेसुसहितका अधिकांश चिकित्सकका दरवन्दी खाली छन्।
दरवन्दी नै नरहेको कन्सल्टेन्ट मेडिकल जर्नलिष्ट डा. विना शाक्यलाई निमित्त मेसुको जिम्मेवारीमा पठाइएको छ । कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन फरेन्द्र साहसहित करारमा रहेका अन्य कही डाक्टरका भरमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
अस्पतालले इनरुवा नगरपालिकाका १० वटा वडा, भोक्राहा–4्ग गाउँपालिका, कोशी–लौकही गाउँपालिका लगायतका लाखौं सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष सेवा दिँदै आएको छ । यसका अतिरिक्त भारतीय क्षेत्र र पुर्व पश्चिम राजमार्गका कारण आपतकालिन रुपमा आउने बिरामीलाई पनि यस अस्पतालले सेवा दिने गरेको छ।
आकस्मिक कक्षमा मात्रै दैनिक सरदर ४० जना बिरामी हुने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष १० हजार ५ सय ७० जनालाई सेवा दिइएको थियो । दिन प्रतिदिन बिरामी भर्ना हुने र सेवा लिने क्रम वढेको छ । तर, चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी नहुँदा बिरामीलाई सेवा दिन धौ–धौ भएको आकस्मिक कक्षका इन्चार्ज गुणानन्द झाले बताए।
सामान्य अवस्थामा करिव १५ जना स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यक्ता रहेको आकस्मिक कक्षमा हाल ८ जना स्वास्थ्यकर्मीले जसोतसो सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । बिरामीको अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सेवा दिन समस्या भएको उनको गुनासो छ । ‘विहान, दिउँसो र राती गरी तीन सिफ्टमा बिरामी हेर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘८ जना स्वास्थ्यकर्मीले लगातार काम गर्नुपर्दा वाक्क हुन्छ।’
कोहि एकजना बिदा वसे वा बिरामी परे अर्कोले खप्टिएर काम गर्नु पर्ने वा एक सिफ्टको सेवा पूर्ण रुपमा प्रभावित हुने गरेको उनले जानकारी दिए।
डाक्टर अधिकांस दिन अनुपस्थित
अस्पतालमा हाल कार्यरत डा. तथा स्वास्थ्यकर्मी समेत आफु खुसी चल्न थालेपछि स्वास्थ्य सेवा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको कर्मचारीहरु वताउँछन् । ‘डाक्टरको भरमा चल्नु पर्ने अस्पताल नै भगवान भरोसा चल्दैछ’ एक कर्मचारी भन्छन्–‘दरवन्दि अनुसार जनशक्ति छैन, भएको जनशक्ति समेत आफूखुसी चल्न थालेपछि सेवा कस्तो होला?’
अस्पतालमा ४ जना मेडिकल अधिकृतको दरवन्दि छ । जसमध्ये डा. सुन्दरश्याम झा मात्रै दरवन्दीमा छन् । मन लागे आउने र मन नलागे नआउने गर्न थालेपछि उनीमाथि भरोसा गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाजिरी रजिष्टर अनुसार पनि डा. झा भदौ ९ गतेदेखि लगातार अनुपस्थित छन् । असारमा पनि २० दिन अस्पताल नआएका झाको वैशाख–जेठमा पनि उपस्थिती सन्तोषजनक छैन । ‘मन लागे आउने र मन नलागे नआउने उनको स्वभाव छ,’ कर्मचारीहरु भन्छन्, ‘छुट्टि स्विकृत गराउने नियम समेत मान्न छोडेपछि उनको भरमा अस्पतालको सेवा कसरी चल्छ ?’
यसैगरी, ५ जना सिअनमि÷अनमी मध्ये मैयाँ कुमारी तामाङ्ग असार १ गतेदेखि नै अनुपस्थित छिन् । उनले विदा स्विकृत पनि गराएकी छैनन् । माथिल्लो तहवाट समेत उनको वारेमा खोजी खवर गर्ने र कतै गएको विषयमा जानकारी दिने काम नभएको अस्पतालले जनाएको छ।
सुविधाभोगी डाक्टर र मन्त्रालयको चलखेल
इनरुवा अस्पतालको सेवा प्रभावित हुनमा सुविधा भोगी स्वभाव, चाकरी परम्परा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको चलखेलले पनि काम गरेको छ । अस्पतालमा दरवन्दी कायम गरी सुविधा सम्पन्न ठाउँमा काजमा जाने रोग यस अस्पतालको प्रमुख समस्या हो।
सर्जरीका डा. योगेन्द्र गुप्ता र जनरल मेडिसिनका दिनेश न्यौपाने अहिले पनि विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पतालमा काजमा छन् । अस्पतालमा हाजिर भएको एक हप्ता नपुग्दै सचिव स्तरीय निर्णयले डा. झा र न्यौपानेको काज सरुवा गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।
यस्तै, केही कर्मचारी, मन्त्रालय हेर्ने पार्टीका कार्यकर्ताहरुको हस्तक्षेपलगायतका कारण पनि अस्पताल सुधारमा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
आर्थिक हिनामिनामा कर्मचारी
इनरुवा अस्पताल आर्थिक हिनामिनाका कारण पनि चर्चामा आउने गरेको छ । गत साउन महिनमा १९ लाख बढी रकम हिनामिना भएपछि अस्पताल विवादमा तानिएको थियो । बिरामीले तिरेको शुल्क इन्ट्री गर्न खटिएका कर्मचारीले रकम बैंक दाखिला नगरी हिनामिना गरेको विषयमा रेडियोग्राफिक अफिसर ध्रुव घिमिरे, नायव सुब्बा नेत्रप्रसाद खतिवडा र लेखापाल श्रवणकुमार घिमिरेसहितको तीन सदस्यिय टोलीले छानविन गरेको थियो।
छानविनका क्रममा अजय प्रधानले ३ लाख ६९ हजार ५२१, कविता पोदारले ४ लाख ९१ हजार ८०३, सरु भट्टराईले १३ हजार ६९७, विकेश श्रेष्ठले १० लाख ६४ हजार ५३५ र आयुषी शाक्यले १८ हजारभन्दा वढि रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ।
रकम हिनामिना भएको विषयमा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा चलिरहेको छानविन समितिका संयोजक घिमिरेले वताए।
सञ्चालनमै आएन सिइओएनसी सेवा
सरकारले देशका अधिकांश जिल्लामा सघन आकस्मिक प्रसूति सेवा तथा नवजात शिशु सेवा (सिइओएनसी) कार्यक्रम लागू गरेको छ । जसमा शल्यक्रिया गरी सुत्केरी हुने (सिजरिङ) सेवा प्रमुख छ।
मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युदर कम गर्ने उदेश्यले संचालित यो कार्यक्रम इनरुवा अस्पतालमा पनि सुरु गर्ने लक्ष्य सहित हरेक गतवर्ष वजेट समेत छुट्टिएको थियो । तर, हालसम्म सेवा भने सुरु हुन सकेको छैन।
सेवा सञ्चालनका लागि गत वर्ष (२०७४ फागुन) गाइनो, ओटी नर्स, एनेस्थेटिक, ल्याव असिस्टेण्ट र कार्यालय सहयोगी गरी ५ जनाको 23 गरेपनि गाईनो र एनेस्थेटिकमा दरखास्त नै नपरेपछि योजना अलपत्र परेको खतिवडा बताउँछन् । सोहि 23 अनुसार नियुक्ति पाएका ओटी नर्स, ल्याव असिस्टेन्ट र कार्यालय सहयोगीको पनि करार समाप्त भएकाले भोलेन्टियरका रुपमा काम गरिरहेको उनको भनाई छ।
यसैविचमा सिइओएनसीसहित स्वास्थ्य सेवा सुधारमा केन्द्रित भएर उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव तथा प्रदेश १ का मन्त्रीले पनि अस्पतालको निरिक्षण गरेकाले केहि आशावादी हुन सकिने उनले बताए।
सिइओएनसी सेवा सञ्चालनका लागि इनरुवा नगरपालिकाका मेयर राजन मेहताले पनि चासो देखाएका छन् । धरान स्थित विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरी ओटि सेटप गर्ने र सेवा सुरु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
त्यसपछि नगरपालिका वाटै नै सेवा सुविधा पाउने गरी एक जना गाईनो नियुक्त गर्ने मेयर मेहताले आश्वासन दिएको खतिवडा बताउँछन्।
यता, अस्पतालले भदौ १ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्राचार गरी सिइओएनसी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक्त जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराई दिन माग गरेको छ । त्यसको जवाफ हालसम्म नआएको अस्पतालकी डा. निमित्त मेसु विना शाक्यले जानकारी दिइन्।